Mgbasa Ahịa: Atụmatụ isii na-emeri obi (na ndụmọdụ ndị ọzọ!) | Martech Zone
Ide ederede akwụkwọ ozi bụ echiche nke gbasoro laa azụ n'oge gara aga. N'oge ahụ, akwụkwọ ozi ire ere bụ ihe a na-emekarị iji dochie ndị na-ere ahịa site n'ọnụ ụzọ ruo n'ọnụ ụzọ na olulu ha. Oge a chọrọ ịbịaru ọgbara ọhụrụ (lee anya na mgbanwe na mgbasa ozi ngosi) na ide akwụkwọ ozi azụmaahịa abụghị otu.
ụfọdụ ụkpụrụ niile gbasara ụdị na ihe ezi akwụkwọ ozi dị mma ka na-adị. Nke ahụ kwuru, usoro na ogologo nke akwụkwọ ozi azụmahịa gị dabere na ụdị ndị na-ege gị ntị na ngwaahịa ịchọrọ ire. Ogologo oge mbụ bụ 4-8 paragraf, ma ọ nwere ike ịbụ karịa ma ọ bụrụ na ngwaahịa gị chọrọ nkọwa ziri ezi, ma ọ bụ obere, maka ịnye ọnụahịa zuru oke.
Agbanyeghị, anyị ga-elekwasị anya na ọghọm bara uru nke nwere ike ọ bụghị naanị inyere gị aka imechi azụmahịa kamakwa ị ga-enweta obi ndị na-ege gị ntị.
Strategy 1: Jiri akpaaka Iji hazie gị Business Akwụkwọ Ozi Leta
Y’oburu n’achọ ka ire ahia ahia gi inweta obi, ikwesiri iguzo otutu uzo. Nke mbu, ikwesiri imeputa ihe ma mee ihe nke onwe. Izipu ihe edere ederede bụ ụzọ dị mma iji mee ka akwụkwọ ozi gị zipụ, agbanyeghị, ide ha n’otu n’otu nwere ike iwe gị oge.
Luckily, i nwere ike iji a ọrụ ederede aka aka nke na-eme ka usoro ahụ dum rụọ ọrụ ma na-eme ka ederede gị dị ka ọ bụ aka mmadụ dere ya site na iji ezigbo pen. Izipu akwụkwọ ozi azụmahịa dị ka nke a, nke nwere ọdịdị na-adọrọ mmasị, ederede ederede ahaziri, bụ ụzọ dị mma iji merie obi onye nnabata.
Nzuzo nke 2: Gosiputa ihe ngosi nke oma
Ọ dịghị ihe na-ere karịa ngwaahịa nke akpọrọ "mgbanwe ndụ" site n'echiche na ahụmịhe nke ndị jiri ya. Nke a apụtaghị na ngwaahịa gị kwesịrị ịdị mgbanwe, mana ọ ga-enwerịrị ihe ngosi siri ike nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya site n'olu ndị ahịa nwere afọ ojuju.
Ọ bụ ya mere o ji dị mma ịgụnye nkwado mmekọrịta n'etiti akwụkwọ ozi gị. Inye njikọ na vidio ịgba akaebe bụ otu ụzọ isi mee nke ahụ. Usoro a gosipụtara n'ụzọ dị irè ịre ahịa.
Onye nlere vidio onye ahia bu uzo maka uzo CTA (Call to Action) nke ekwesiri idowe n'okpuru ihe akaebe. Ebumnuche bụ iji ike nke mmetụta uche dị mma na mmụọ nsọ nke akaebe gị mere ka ndị na-ekiri ya wee nye ha nhọrọ ịzụta (site na CTA).
Usoro 3: Jiri LinkedIn Automation Tools
Enweghị ezigbo ebe maka ndị na-ere ahịa B2B ịkwado ma zipu akwụkwọ ozi ahịa karịa LinkedIn. LinkedIn bụ nnukwu azụmaahịa azụmaahịa ebe ụdị ọkachamara niile na-ezukọ iji mụta, netwọkụ, bulie azụmaahịa ha ma zụọ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ha. Ọ bụ ahịa pụrụ iche nke nwere ọtụtụ ohere ekwesiri ịhapụrụ gị maka atụmatụ azụmaahịa gị.
ọtụtụ Ngwa ngwa ngwa LinkedIn nwere ike inyere gị aka imezu ọkwa dị elu nke onwe na ụzọ okike. Iji maa atụ, ụfọdụ n’ime ngwa ọrụ ndị a na - enye ihe nlere anya onyonyo ka ịnwere ike itinye aha nnata ma ọ bụ foto profaịlụ n’ime onyonyo, ka ọ bụrụ nke onwe. Ngwaọrụ ngwa ngwa LinkedIn nwekwara ike wepu ozi ziri ezi site na profaịlụ ndị ị lekwasịrị anya na ya wee mepụta ozi nkeonwe na nke nghọta dịka mmadụ dere ha.
Nzuzo nke 4: Mee Nmeghe Onwe Onye
Otu nnukwu ndudue mgbe ị na-ede akwụkwọ ozi ire ere bụ ekele ekwesighi. Ọ dịghị onye na-enwe mmasị ọnụọgụ ekele dịka "Ezigbo ndị ahịa na-eguzosi ike n'ihe" ma ọ bụ "Ezigbo onye na-agụ". Kama, ndị na-ege gị ntị chọrọ ka obi dị ha mma, kwanyere ha ùgwù, ma mesoo ha ihe n’ụzọ pụrụ iche.
Ọ bụ ya mere gụnyere aha ha na ọrụ ha (maka azụmahịa B2B) na ekele gị, bụ ụzọ doro anya iji gosi ha na ị na-agwa onye ahụ okwu. Ingga site na "Ezigbo Ben" ma ọ bụ "Ezigbo Dọkịta Richards" ga-enweta gị ogologo ụzọ ma hụ na onye nnata ahụ ga-achọ ịgụ akwụkwọ ozi gị n'ihu.
Site na nnukwu ndị na-ege ntị, ọ na-esiri ike iji aka gị gwa onye ọ bụla okwu n'ụzọ pụrụ iche wee dee leta ọ bụla edepụtara maka ha. Nke ahụ bụ ebe akpaaka na-abata n'aka ma chekwaa oge dị ukwuu site na iji aka gị ịnakọta ozi dịka aha, ọrụ, okike, wdg.
Usoro 5: Jiri vidiyo maka ahia ahia gi
Video dị ugbu a bụ otu n'ime ihe kachasị ụdị ọdịnaya dị mma nke ahụ na-eme ka itinye aka na-enweghị atụ ma nwee ike ịmị ndị na-ege ntị karịa usoro ọ bụla. Shouldkwesịrị ịkwado ya maka uru gị ma tinye ya na akwụkwọ ozi azụmaahịa gị iji mee ka ahịa gị baa uru.
Oghere vidiyo nwere ike ịdọrọ uche onye na-ekiri ya ma kwurịtara isiokwu ndị ị na-ejikarị ede ederede. Na vidiyo, ị nwere ike ịgụnye ihe ngosi a na-ahụ anya nke ọrụ gị na arụmọrụ, gosipụta afọ ojuju nke onye ahịa gị, na n'ikpeazụ, jikọọ miri emi na ndị na-ege gị ntị.
Ọtụtụ ngwaọrụ nwere ike inyere gị aka ịme ozi vidio ahaziri iche nke nwere ọtụtụ ihe ngosi na ihe ngosi anya, nke ga-eme ka ntụgharị gbanwee.
Strategy 6: Jiri agụ oge
Nwere ike ịgụnye ngụda oge na ozi ịre ahịa gị ka ha nwere ike iwulite echiche nke ịdị ngwa na onye na-agụ ya. Ekwesịrị itinye oge ndị a n'elu, n'okpuru isi okwu ahụ, wuru ya na-adọrọ mmasị nke na-adọrọ uche.
Ihe mgbaru ọsọ gị abụghị iji ọsọ mee ha kama igosipụta atụmatụ kachasị mma nke ngwaahịa gị ma mesie ya ike na oge ịme ihe pere mpe. Nke ahụ kwuru, ị ka ga-enwerịrị azịza dị irè maka isi ihe mgbu ha na usoro kwesịrị ekwesị iji gosipụta ya.
Lee ụfọdụ Atụmatụ Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi Ọzọ
Ndị a bụ ụfọdụ ndụmọdụ iji mee ka akwụkwọ ozi azụmaahịa gị merie obi:
Gbalia ịmara ndị na-ege gị ntị ma kesaa ha nke ọma ka ị nwee ike ịmata nkọwapụta ha
Mepụta isi okwu na isi okwu ga-adaba adaba n’ụdị ndị na-ege gị ntị
Gụnye ihe karịrị otu CTA ebe ọ bụ eke (n'okpuru gị video àmà, na njedebe nke leta ahụ, wdg)
Jiri nko iji mepụta mmetụta uche na ndị na - agụ akwụkwọ gị
Jiri igbe dị omimi n’akwụkwọ ozi gị niile iji mee ka ndị na-agụ ya gụọ ndị ọzọ dozie ya
Tinye onyinye gị mgbe niile na ibe mbụ
Ejila ozi ahụ gabiga ya, tinye naanị eziokwu, njirimara, na njirimara ndị ọzọ ngwaahịa na ọrụ gị nwere
Jiri usoro egosipụtara dịka Johnson igbe iji gosipụta uru nke onyinye gị na leta niile
Kedu ihe bụ Johnson Box?
Afọ iri isii gara aga, onye ọkachamara mgbasa ozi Frank H. Johnson nwalere ma ọ bụrụ na ọ nwere ike ịbawanye ọnụego nzaghachi na akwụkwọ ozi ya site na usoro ejiri ịhụnanya mara dị ka Johnson Box. Johnson Box kwuru onyinye a n'isi okwu karịa ekele ahụ.
Ide ederede ahia dị ukwuu bụ usoro na-eche echiche ma na-achọsi ike. Ekwesịrị iji nlezianya dee okwu gị, ọdịnaya gị ahaziri nke ọma yana echiche mgbe ị gụsịrị akwụkwọ kwesịrị iti mkpu "ngwaahịa a na-enye uru".
Na mgbakwunye, iji hacks ga-azọpụta oge gị ma nye ụfọdụ ụzọ mkpirisi iji zere iji aka gị na-eme ihe na-enweghị isi. Hacks nwekwara ike ịgbakwunye mmetụ nke mmadụ na ihe okike na ọdịnaya akwụkwọ ozi gị, dabara maka ndị na-ege gị ntị na nkọwa ha.
Ike ire ahịa bụ isi nke akwụkwọ ozi azụmaahịa na-aga nke ọma ma na-eme ihe iji hacks bụ ọnụ ụzọ iji merie obi ndị nnabata.
Tags: akwụkwọ ozi azụmahịangụdaOge ngụdactaozi ederedeFrank Johnsonaka ide ederedeaka ederedeọrụ ederede aka akaejiri akaesi dee akwukwo ozijohnson igbeọrụ letaederede ederedenjikọ automationmmeghendụmọdụ ọpụpụoyiri oyiriederede ederedeleta ire ereahia ahiaatụmatụ ịre ahịa ahịavidiyo maka irere ahia
David Wachs bụ serial entrepreneur, ọrụ ọhụrụ nke David, Emere aka, na-eweghachite nka ederede furu efu site na ihe eji agbanwe agbanwe, nke dabeere na robot nke na-ede ederede gị na mkpịsị odee. Emepụtara dị ka ikpo okwu, Handwrytten na-ahapụ gị ka ị zipu ndetu site na sistemụ CRM gị, dịka Salesforce, weebụsaịtị, ngwa ọdịnala, ma ọ bụ site na njikọta omenala.